Warshadda Shiinaha Rubber Roller iyo soosaarayaasha | Awood
Rubber Rullaluistemadka CNC qiray High Cylindrical Grindin ...
Sida soo saaraha rullaluistemadka caag khibrad khibrad leh ee Shiinaha, waxaan ku siin rollers kala duwan oo duurka ku kala duwan.
1. Waxyaabaha:Waxa uu korsadaa xeryo caag ah oo si gaar ah loo farsameeyay oo laga soo dhoofiyay Mareykanka iyo Jarmalka si loo soo saaro noocyada kala duwan ee robal robal. Rubber Dabiici ah, Caag Nitrile ah, Neoprene, Butyl, EPDM, Polyurethane, Silicone, Fluorine iyo wixii la mid ah
2. Soosaarid:Ku ad adag nidaamka wax soo saarka Nidaamyada shaqada ee daruuriga ah ee kala duwan si loo hubiyo tayada ugu kalsoon. Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin teknoolojiyad wax soo saar oo casri ah iyo tayo wax soo saar aad u fiican, oo ay aqoonsan yihiin dadka isticmaala gudaha iyo shisheeyaha. Shirkaddu waxay noqotay unug loogu talagalay soo iibinta duubista caagga ee warshado badan oo waaweyn oo daabacan.
3. Xakamaynta Tayada: Si sax ah loogu hubiyey qalabkeena lagu cabbiro qalabka wax lagu xiro laser-ga taxanaha ah ee loo yaqaan 'PSF'.
4. xirxirida:Waxaan u tixgelineynaa baakadaha inay tahay xiriir muhiim ah. Baakadaha taxaddar leh oo habboon waa muhiim si loo hubiyo xaaladda wanaagsan iyo gaarsiinta guusha ee duubka caagga ah.
5. Inaad Dooratid:Xirfad xirfadeed iyo daacadnimo dhan, Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd. waxay u heellan tahay soo saarista rolleyaal caag ah oo tayo sare leh una dhow baahiyaha xilligii sayniska iyo teknolojiyadda. Nooc kasta oo nooca duubista caagga ah ee aad doorato, hubaal waad heli kartaa kalsoonida. Waxaan aad u adag nahay habka wax soo saarka rullaluistemadka caag ah, waxaanna hubineynaa tayada ugu sareysa iyo adkeysiga la isku halleyn karo iyadoo aan la ilaalin doonin wax dadaal ah si kor loogu qaado nidaamka shaqada iyo isku dhafka awooda farsamada ee dhinacyada oo dhan.
6. Astaamaha Kala Duwan ee Rullaluistemadka Rubber
- Dabiiciga Rubber Roller - dabacsanaan aad u fiican iyo xoog farsamo, caabbinta alkali wanaagsan ee dharka, warqad maqaar, qalabka baakadaha, sida nooca-duuban compactor iyo metallurgy, macdanta iyo warshadaha kale nooca rullaluistemadka.
- Rullaluistemadka caagga nitrile - iska caabin saliid wanaagsan, iyo xidhashada u adkaysata, gabowga, iska caabinta kuleylka sidoo kale waxay ufiican tahay daabacaadda, daabacaadda iyo dheehida, faybar kiimiko ah, warqad, baakado, qalabka wax lagu farsameeyo caagagga iyo xiriir kale oo lala yeesho saliida hydrocarbon iyo dufanka jeermiska leh.
- Nuuradda Neoprene - iska caabin abrasion aad u fiican, iska caabin dab sare, iska caabin gabowga, iska caabin kuleylka wanaagsan, caabbinta saliida iyo aashitada iyo mashiinada daxalka ee PCB, caag, maqaar, daabacaadda, birta cuntada Indian, mashiinada daahan caadiga ah.
- Rullaluistemadka caagga ah - iska caabinta sare ee dareeraha kiimikada, iska caabinta kuleylka wanaagsan (170 ℃), aashito wanaagsan, laguna dabaqo makiinado daabacan midab, mashiinada maqaarka, qalabka daahan.
- EPDM rullaluistemadka caagga - iska caabin heer sare ah gabowga ozone iyo u adkaysiga cimilada, heerkulka hawlgalka ballaaran wuxuu noqon karaa -65 ℃ ilaa 140 ℃ shaqada muddada-dheer, waxqabadka dahaadhka, mashiinnada daabacaadda caagga ah, mashiinnada hargaha, meelaha guud
- Duubista caaga Polyurethane - xoog farsamo oo aad u sarreeya oo iska caabbinta, anti-gabowga iyo caabbinta saliidda sidoo kale waa mid aad u wanaagsan, oo badanaa loo isticmaalo sameynta waraaqaha, fiilada kiimikada, qoryaha, mashiinada wax lagu farsameeyo ee caagga ah.
- Rullaluistemadka caagga ah - inaad u isticmaasho iska caabinta heerkulka sare, ozone, kiimikada aan firfircooneyn iyo caag aan dheg dheg aheyn oo loogu talagalay kaamerada waxsoosaarka waxsoosaarka leh, sida rogista polyetylenka, xarkaha, daabacaadda iyo dheehida iyo filimka iyo dhejiska dusha ka sameynta dharka, mashiinka wax lagu farsameeyo ee corona, waa sidoo kale loo isticmaalay soosaarka sonkorta iyo sii deynta mashiinka wax lagu rito ee rollers iyo wax soo saarka aan tolmo wanaagsan lahayn.
- Rullaluistemadka caagga ah Fluorine - kuleyl aad u sarreeya, saliid, aashito, sida waxqabadka, iska caabbinta gaaska, dahaadhka korantada, gabowga, u ololka u adkaysiga, astaamaha u adkaysta xirashada ayaa sidoo kale aad ugu fiican qalabka daahan gaar ah.
- Roller mashiinka daabacaadda ee ballaaran.
- Isu duub mashiinka waraaqaha lagu nadiifiyo.
- Iskeelka mashiinnada dharka.
- Duub mashiinka filimka balaastigga ah.
- Rullaluistemadka nidaamka conveyor plywood.
- Isukeeji macdanta iyo warshadaha shaandhada.
Hore: Autoclave- Nooca Kuleylka Korantada
Xiga: Qalabka Rullaluistemadka Daawaha Qalabka Mashiinka
Mashiinka Samaynta Rullaluistemadka Rubber
Mill qasin Mill (Laba Motors & Laba saarka)
Sifeeyaha Rubber / Sifeeyaha Rubber
Qalabka Nadiifinta Rubber Sand Sand
Fur Nooca Isku Qasan Mashiinka